वेदकोट नगरमा भएका ५ वर्षका महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु | सुदुरपश्चिम खबर
कञ्चनपुर जिल्लाको वेदकोट नगरपालिका बि.स २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति वार्ताको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । संघीयता र राज्य पुर्नसंरचनापश्चात संबैधानिक रुपमै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरियो ।
साबिकका गाबिसहरु मिलाएर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु निर्माण गरिए । तत्कालिन सुडा र दैजी गाबिस मिलाएर वेदकोट नगरपालिका बनाइएको हो । यो नगरपालिकासहित देशैभर एकैसाथ २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमार्फत जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आए ।
नेपालकै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको अभ्यास नयाँ थियो । तरपनि चुनावका बेला जनता माझ गरिएका वाचा, प्रतिबद्धता र घोषणापत्र अनुरुप यसबीचमा समुन्नत र सुसंस्कृत वेदकोट बनाउनका लागि धेरै प्रयासहरु गरिएका छन् । ती सबै कामहरु यहाँहरुको आँखै अगाडि छर्लङग छन् । तिनको सम्पूर्ण फेहरिस्त यो छोटो लेखोटमा सम्भव छैन् । त्यसैले प्रतिनिधि र नमुनायोग्य कामहरुको जानकारी संक्षिप्त रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– २० वर्षे (मास्टर प्लान) नगर गुरु योजना बनाएर काम गरेको ।
– आवधिक योजना निर्माण गरी काम अघि बढाएको ।
(१) पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण
(२) सडक यातायात पुर्वाधार
(३) १३ वटा खानेपानी आयोजनाहरु वेदकोट नगरपालिका
(४) स्वास्थ्य क्षेत्रको काम
१२. अवकास हँुदा स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई २ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३. कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण उपचार र खोपको व्यवस्था ः ११ वर्ष भन्दा माथि सबैलाई खोप लगाइएको छ ।
– एऋच् परिक्षण, च्म्त् त्भकत निःशुल्क भइरहेको छ ।
– नि :शुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
(५) शिक्षा क्षेत्र
(६) उर्जा तथा जलस्रोत÷सिंचाई क्षेत्र
(७) कृषि क्षेत्रमा वेदकोट नगरपालिका
(८) पशुपालन क्षेत्र
(९) नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण
(१०) प्रशासकिय भवन र वडा कार्यालय निर्माण
(११) पर्यटन पूर्वाधार तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास
३. शिव लिंगेश्वर धाममा मन्दिर निर्माण, गेट निर्माण, हल निर्माण, झोलुंगे पुल निर्माण, पार्क निर्माण, सेल्फी प्वाइन्ट निर्माण, पार्किङ, भूसंरक्षण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् । गुरुयोजना अनुसार शिव लिंगेश्वरमा ७ करोडको टेण्डर भएको छ । थप काम गर्न आश्रम भवन, अफिस भवन, पूजा हल, सत्संग हल, विवाह मण्डप, पसल निर्माण, पार्क निर्माण, पार्किङ निर्माण, सोलार बत्ती जडान, खानेपानी र शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गरिने छन् ।
शिव–महादेवहरुको संग्रहालय निर्माण गर्न बहुबर्षिय योजनाका लागि संघीय सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको छ ।
(१२) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती (दैजी औद्योगिक क्षेत्र)
(१३) सामुदायिक (छाडा) गाई गोरु व्यवस्थापन
(१४) जनताको जग्गा जनताको नाममा : अभियान अन्तर्गत
ड्ड वेदकोट नगरपालिकामा ९ हजार भन्दा बढी घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक रहेको छ । तथ्यांक संकलन २०७७ फागुन १ देखि गरेको र तथ्यांक प्रविष्ट २०७७ चैत्र १५ देखि सुरु भएको थियो । कोभिडले रोकिएको काम फेरी शुरु भएको र २०७८ असारमा जग्गाको नाँप जाँचका लागी न्एक् प्वाइन्ट राखिएको थियो । त्यसपछि २०७८ श्रावण २० गते देखि अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाँप जाँच प्रकृया शुरु भएको थियो । तर, आयोग विगठन भएका कारण केहि दिनपछि जग्गा नापी कार्य बन्द भएको थियो । पुनः राष्ट्रिय भुमि आयोग गठन भएपछि २०७८ पौष २३ र २४ गते आयोगसँग सम्झौता गरी अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाँप जाँच (नापी कार्य) २०७८ फागुन १० गते देखि ५ वटा वडामा ७ वटा टोलीले जग्गा नाँप जाँच नापीको काम वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ नं. वडामा जग्गा नापीको काम सकिएको छ । बाँकी वडाहरुमा क्रमशः ६, ७, ८, ९ र १० मा नापीको काम भइरहेको छ । जग्गा नापी गरी जनतालाई जग्गा धनि पुर्जा दिने गरी काम अघि बढेको छ । २०७९ असार महिनासम्म सबै वडाका ११००० घर परिवारको जग्गा (नापी) नाँपजाँच गरिसक्ने योजना र कार्यक्रम रहेको छ ।
-गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत विभिन्न सिप तथा रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन भएका छन् ।
– सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रम र आर्थिक विकास र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् ।
– छुट मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना भएको छ ।
– वेदकोट नगरपालिकाको भूउपयोग नक्शा तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
– सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी स्थानीय सरकार मातहत ल्याइएको छ ।
– मुक्त कमैयाका घर बनाउन काठको रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
– मुक्त कमैयाहरुलाई विभिन्न सिपमुलक, व्यवसायमुलक तालिम दिएर उद्यमी बनाइएको छ ।
(१५) पूर्वाधार निर्माण
– अक्सिजन प्लाण्ट
– हस्पीटल निर्माण
(१६) युवा खेलकुद क्षेत्रमा
– बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।
-कभर्ड हल निर्माण गरिएको छ ।
-क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिएको छ ।
– जिम हाउस निर्माण गरिएको छ ।
-खुला जिम हाउस निर्माण गरिएको छ ।
– दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी १२४ वटा उद्योग संचालन गर्दा ३० हजार युवालाई रोजगारी दिन ७ अरब भन्दा बढीको योजना अघि बढाईएको छ ।
– स्वीमिङ्ग पुल र पार्क निर्माण गरिएको छ ।
– खेलाडीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम पुरस्कार एक वडा एक खेल मैदान निर्माण भएको छ ।
-विभिन्न खेलकुद कार्यक्रहरु आयोजना, प्रयोजन÷सहयोग र सहभागीता राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरिएका छन् ।
– राष्ट्रपती रनिङ्ग शिल्डको आयोजना
– खेलाडीलाई सम्मान
– एक वडा एक खेल मैदान निर्माण
– लागूऔषध ओसारपसार विरुद्ध अभियान
– नमूना युवा संसद कार्यक्रम
-स्थानीय युवा क्लब मार्फत खेलकुद प्रतियोगिता संचालन
-नगर किशोरी संजाल गठन र कार्यक्रम
– युवा संजाल गठन र कार्यक्रम
– निःशुल्क लोकसेवाका कक्षाहरु संचालन गरिएको ।
– विभिन्न व्यवसाय संचालन गरेका युवाहरुलाई बिउ, पुँजी वा सामाग्री हस्तान्तरण गरेको ।
– विपन्न गरिब विद्यार्थीहरुलाई निः शुल्क पढाउने गरेको ।
– प्राविधिक शिक्षा पढन छात्रवृतिको व्यवस्था गरेको ।
-विभिन्न सिपमुलक, रोजगार मुलक कार्यक्रम संचालन गरेको ।
– दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिहरुलाई उपचार र पुनःस्थापना गरी उद्यामशिलता र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन गरेको ।
(१७) बालवालिका,जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा
-नमुना किशोरी संजाल गठन गरी बिभिन्न रचनात्मक, सृजनात्मक काम गरिएका छन् ।
-युवा संजाल गठन गरी सामाजिक कामहरु गरिएका छन् ।
– १० वटै वडामा महिला शक्ति केन्द्र गठन गरेर सशक्तिकरण गर्दै हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउने कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
– महिला बिरामीका लागि विशेष स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको ।
-महिलाहरुका लागि सिप विकास तालिम, व्यवसायिक तालिम संचालन गरी आयमुलक रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
– महिलाहरुले संचालन गरेको उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग गरेको ।
– नेतृत्व विकास, क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गरेको ।
– अन्तर पार्टी महिला संजाल गठन गरी कार्यक्रम गरेको ।
– हिंसामा परेका महिलाहरुलाई निः शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
– छाउपडि भएका बस्ति र वडाहरुमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर छाउपडि महिनावारी भएको बेला बस्ने सानो घरलाई भत्काएर छाउपडि मुक्त वडा घोषणा गरेको ।
-सुत्केरीका लागी निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको ।
– महिलाहरुलाई राजनीतिमा, सामाजिक क्षेत्रमा, साँस्कृतिक क्षेत्रमा नेतृत्वका लागि विभिन्न क्षमता विकास तालिम संचालन गरेको ।
(१८) वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनिकरण
– १२ कि.मि फेन्सिङ्ग मेस वायर निर्माण गरी जंगली जनावर वन्यजन्तुबाट हुने वालीनालीको नोक्सानीको रोकथाम नियन्त्रण गरीएको र थप फेन्सिङ्ग मेस वायर निर्माण गर्ने कार्यक्रम
-जंगली जनावरले क्षती गरेको बालीनालीको राहत उपलब्ध गराउने गरेको ।
(१९) दैविप्रकोप नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन
-हावाहुरीले ३०० भन्दा बढी घर भत्काएर क्षती पुगाएको घर घरमा गएर नगर प्रमुखको नेतृत्वमा क्षतीको विवरण संकलन गरी राहत उपलब्ध गराएको र घाईतेहरुको उपचार भैरहेको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थीक सहयोग गरेको ।
– आगलागी भएर घर, पसल, गौशाला, भन्सा लगायत क्षती भएको घरमा राहत, आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराएको ।
– अबिरल वर्षाले घर भत्काएको, घर डुवान भएका घर परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको ।
– कोभिडका कारण लकडाउन भएका समयमा गरिब, विपन्न तथा ज्यालादारी गर्ने श्रमिक मजदुरको घर घरमा गएर नगर प्रमुखले कुन घरमा के समस्या छ त्यो हेरेर बुझेर तत्काल राहत उपलब्ध गराएको ।
– चिसो जाडोयाममा दाउरा, मुडाको व्यवस्थापन गरी चिसोबाट जोगिने कार्य गरेका छौं ।
-विपन्न घर परिवारका व्यक्तिलाई र जेष्ठ नागरिक आमा बुवालाई न्यानो लुगा वितरण गरेका छौं ।
(२०) अन्य महत्वपूण कार्यहरु
– वेदकोट नगरपालिका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधी १०० भन्दा बढी निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
-कोभिड बिरुद्धको खोप अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई घरघरमा गएर खोप लगाउने कार्य गरेको ।
-स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सहायक सामाग्री उपलब्ध गराएको ।
– जेष्ठ नागरिक, खेलाडी, विद्यार्थी, शहिद परिवार, एकल महिला,द्वन्द पिडित परिवारलाई वेदकोट नगरपालिकाले सम्मान गरेको
-विपन्न भएका घर परिवारहरुलाई सुधारिएको चुलो बितरण गरिएको ।
– महिला, दलित, आदीबासी जनजाती, लोपन्मुख समुदाय, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, मुक्त हलिया, भुमिहिन– सुकुम्बासी, एकल महिला, शहिद परिवार,द्वन्द पिडित, आरक्ष पिडित, दृष्टि बिहिन, बहिरा,अपांगता भएका र बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, किशोर, बालवालिकाहरुका लागि विभिन्न, सिपमुलक, व्यवसाय मुलक, रोजगार मुलक, क्षमता विकास,जनचेतना मुलक, सामाजिक विकृती विसंगती बिरुद्धका कार्यक्रम संचालन गरिएका छन ।
– मदिरा नियन्त्रण तथा लागुपदार्थ ओसार पसार बिरुद्धका कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन ।
– सामुदायिक वन संगको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा वन विकास, सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण गर्न विभिन्न उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन ।
– सब डिभिजन वन कार्यालय संगको सहकार्यमा बिरुवा उत्पादन गर्ने र नागरिकहरुमा निः शुल्क वितरण गरिएको छ ।
– ५ वर्षमा बेदकोट नगरपालिकाको विकास, निर्माण लगायत महत्वपूर्ण कार्यमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
–अशोक कुमार चन्द
बेदकोट नगरपालिकाको कार्यालय
डोटीमा बस दुर्घटनामा १२ जना घाइते
क्याप्चा हल गर्नुहोस् *5+5=